Mahershala Ali oo noqday muslimkii ugu horeeyay ee hela abaalmarinta Oscar - Editor's Picks - Jilaa News - Falanqeynta Fanka iyo Fanaanka
Iyadoo xalayto la baxiyay abaalmarinta aflaamta ee Oscars ayaa waxaa xalay dhacday taariikh qaas ah kadib markuu uu jilaaga muslimka ah ee u dhashay Mareykanka ee lagu magacaabo mahershala Ali ku guuleystay in la gudoonsiiyo abaalmarintaan isagoo ku helay filimka Moonlight doorkiisii uuka cayaarayay ee aktarka labaad.
Mehershala Ali ayaa diinta Muslimka qaatay 17 sano kahor waxuuna had iyo goor sheegyaa inuu yahay Muslim aanan dhib ku qabin la noolaanshaha dadka kale ee bani aadamka hooyadiisna ay tahay masiixiyad isagoo horey uga dalbaday dadka Mareykanka in ay sidiisa oo kale noqdaan oo ay xushmad ku wada noolaadaan.
Waxuu asigoo qiireysan u mahadceliyay xaskiisa iyo gabadhiisa yar waxuuna sheegay in ay guushaani tahay mid ayada ay wax ka leedahay. Filimka Moonlight oo uu jilay ayaa asigana qaatay filimka u wanaagsan kaasoo ka dul booday filinkii la filayay inuu qaadanayo abaalmarinta ee La La Land oo si qalad ah loogu magacaabay inuu ku guuleystay balse gadaal laga saxay oo la sheegay inuu Moonlight yahay filimka u wacnaa sanadka.
Atariisashada sanadka ayaa waxaa ku guuleysatay Emma Stone oo dhigtay filimka La la land halka uu aktarka sanadka ka qaatay isna Case Afleck oo jilayay filimkii Manchester by the sea. Waxaa sidoo kale qaadatay kaalinta atriishada labaad , atriishada madoow ee Viola Davis oo ku hanatay filimka Fences. Best Director oo ah filim agaasimaha u wacan ayaa waxaa la siiyay Damien Chaselle oo soo saaray filimka La la land.
Aamir Khan oo filimka Dangal iscayilay hadana isku isku dhisay si aan caadi aheyn.